Maitiro ekuisa zvisina kufanira kunyorera uchishandisa Xcode | IPhone nhau
Maitiro ekuisa zvisina kufanira kunyorera uchishandisa Xcode
IPad nhau | | Apple tv, iOS 9, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple ichangobva kuburitsa nhau munzira yatinogona kuisa kunyorera pane zvishandiso zveIOS uye Apple TV. Iye zvino zvave nyore kwazvo kugona kuisa mapurogiramu asiri muApp Store uye hazvitombofaniri kubhadhara kuti mugadziri account aite kudaro. Kutenda kuhuwandu hukuru hwemapurojekiti akavhurika anowanikwa paGitHub uye Xcode, tinogona kuisa zvinoshandiswa senge emulators kana internet mabhurawuza. izvo hazvingambo kwanisa kuzviita kuApp Store, uyezve haufanire kuti jailbreak iitwe. Tinokupa zvese zvese pazasi.
1 Iyo isingagumi sosi yekushandisa
2 Uchishandisa Xcode kugadzira edu ekushandisa
3 Chenjerera nezvaunoisa
Iyo isingagumi sosi yekushandisa
GitHub isimba rekushandisa simba reIO ne tvOS. Isu tatsanangura kare mienzaniso miviri yekuisa mashandisiro kubva kune ino repository: Provenance, iyo SEGA uye Nintendo vhidhiyo yemitambo emulator yeiyo Apple TV nyowani, uye Safari browser yeTVOS. Asi iyi ingori mienzaniso miviri yezvingaitwe nekuda kwenharaunda hombe yekuvandudza iri kuseri kweGitHub. Iwe unoda kuziva zvese zviripo zveIOS kana tvOS? Zviri nyore, Iwe unongofanirwa kutsvaga pane iro peji kana zvakananga tinya pane izvi zviviri zvinongedzo izvo zvinokupa iwe mhedzisiro yekushandisa zvinoenderana nezuva rekupedzisira kugadzirisa.
Uchishandisa Xcode kugadzira edu ekushandisa
Hatigone kutaura kuti "kuvaka" maapp, nekuti akatogadzirwa paGitHub, lChinhu chega chatinofanira kuita kusaina neakaundi account yedu kuitira kuti tikwanise kuiisa pane yedu kifaa. Maitiro akareruka anogara akafanana, zvekuti kana uchinge wazviita kakati wandei zvinobva zvangoerekana zvaitika kwauri.
Xcode 7, yemahara kunyorera iwe yaunogona kuwana mu Mac App Store.
Akaundi yekuvandudza, iyo inogona kuve yemahara, haufanire kubhadhara mari yegore. Iwe unogona kugadzira imwe kubva ku Apple yepamutemo webhusaiti.
Iyo USB-mheni tambo ye iPhone kana iPad, kana USB-C yeApple TV.
Kwayakabva iko kunyorera kwawakawana paGitHub.
Nhanho yekutanga ndeye tora purojekiti url kuwedzera kune xcode. Isu tinosarudza chishandiso chatinoda kuisa (mumuenzaniso ini ndasarudza pane ino nyore mamiriro ekunze) uye kurudyi kwescreen tichawana iyo URL yatinofanira kuteedzera kune clipboard. Unogona kuisarudza uye kuikopa nekudzvanya pane diki icon pane kurudyi.
Isu tinovhura Xcode, uye kana tisina kuwedzera account yedu parizvino, inguva yekuzviita izvozvi. Kuti tiite izvi, tinoenda ku "Zvamada> Maakaundi" menyu uye tinyore data reApple ID yedu yatinonyoresa muchirongwa cheApple. Ndinoomerera, haufanire kubhadhara chero chinhu.
Sezvo isu tiine account yedu yakawedzerwa kuXcode, inguva yekutanga chirongwa chekusaina chikumbiro. Mubhawa repamusoro tinosarudza "Kunobva Kudzora> Buda".
Muhwindo rinowoneka, mubhokisi riri pasi, tinonamira kero yatakateedzera kare, uye tinya pa «Inotevera»
Mushure memasekondi mashoma ekuodha pasi zvemukati, inotevera hwindo ichaonekwa. Isu tinosarudza «tenzi» uye tinya pa «Inotevera»
Kana iko kugadziriswa kwekushandisa kwapera, izvo zvinogona kutora kubva pamasekonzi mashoma kusvika kweinopfuura hafu yeawa, zvinoenderana nechishandiso, panomira zita rekuti "Ready" kumusoro kwewindo, tinogona kuiisa pane yedu kifaa. Mune ino kesi, sezvo iri application ye iPhone, ini ndinobatanidza yangu iPhone kune komputa ndichishandisa USB-mheni tambo, uye ini ndinosarudza iyo sezvazvinoratidzika mumufananidzo uri pamusoro. Kana izvo zvangoitwa, tinya pa Play, bhatani rine dema katuriyoni mune yekumusoro kuruboshwe, uye iko kunyorera kuchaiswa pane yedu iPhone (mune uyu muenzaniso). Kana iwe uchida kuona muenzaniso wevhidhiyo, pano iwe unogona kuona iyo yekugadzira uye yekumisikidza maitiro eProvenance, iyo console emulator yeTVOS.
Chinhu chakakosha kwazvo kuchengetedza mupfungwa ndechekuti Xcode uye iOS (kana tvOS) vhezheni yacho inofanirwa kuenderana. Apple inowanzo gadziridza Xcode yeshanduro yega yega, kana zvirinani zvema betas, saka kana iwe uine beta yakaiswa pane yako kifaa uye Xcode haina iyo beta, zvingangoita kuti hazvizokutenderi iwe kuisa iyo application.
Pfungwa diki yakajairika: GitHub haina kudzorwa neApple, uye iko kunyorera hakupfuure nemasefa eApp Store, saka chenjera chaizvo zvaunoisa. Zvirinani kuti iwe ugare uchizivisa iwe pachako nezve kunyorera zvisati zvaitika kuitira kuti iwe usazowana kushamisika kusingafadzi. Parizvino muganho uri kwauri, uye iro ibasa raunofanirwa kufunga.
ONA: iko kushandiswa kunoshandiswa mumuenzaniso uyu kwave kungoshandiswa chete nekuda kwechinangwa ichi. Iyi chaiyo application haishande uchishandisa nzira iyi sezvo iine zvimwe zvinotsamira zvisina basa neiyi dzidziso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekuisa zvisina kufanira kunyorera uchishandisa Xcode
Unogona here kugadzira mota kuti tione kuti mame emulator yakaiswa sei paapuro tv 4?
Parizvino hazvishande zvakanaka. Asi ini ndichazviita nekukurumidza kana zvese zvinhu zvave chokwadi.
Iyi nzira inobvumidza iwe kuti ugadzire iwo maapplication iwe muXcode? Kana kuti ndeyekuti iyo kodhi yekodhi yeAapps akagadzirwa anotorwa kubva kuGitHub ane chimwe chinhu chakakosha? Ndatenda!!
MuGitHub ivo ​​vakatogadzirwa, iwe unofanirwa kungosaina uye nekuaisa pane chako chishandiso
Implosion mutambo weGNn wemwedzi. Tinokuratidza kuti ungaiwana sei.